Semalt: Google Analytics Nhamba Yekutsvaga Peji Kubatanidzwa
Mutengesi wekombiyuta wese anofanirwa kuziva zvipo zvose zvekubatanidza Google Analytics newebsite. Purogiramu inobvumira kutevera kwezvikamu zvakasiyana zvewebasa rekushanda. Chimwe chezvinhu izvi ndechokuita peji peji. Mapeji ekumhanyira anokosha pakudhinda. Ivo vanoita maonero ekutanga uye vanoita zvimwe zvakawanda zvebhizimusi rebhizimisi kubudirira zvinosanganisira kushandiswa kwehuwandu hwevanhu uye kutendeuka kwehuwandu. Nokudaro, kutevera uye kuenzanisa peji yekusimuka kwepamusoro kunodiwa zvikuru paunenge uchiita zvisarudzo pakunatsiridza bhizinesi kudzokera kunekutsvaga.
Kubatanidzwa kweGoogle Analytics kunokupa mufananidzo wakazara wevatengi. Iko inokubvumira kuti uone kutaurirana kwese kwemagariro evanhu, chengorora mvumo yevashanyi, uye tarisa zvikwata zvakabuda. Inokupawo ruzivo rwakakosha kuti uchinje matricrics aya muzviitiko zvekuvandudza kwebhizimisi.
Artem Abgarian, iyo Semalt nyanzvi, inotaura kuti nzira mbiri dzinogona kushandiswa kubatanidza mapeji okutumira neGoogle Analytics. Imwe nzira inoshandisa Script Manager, uye imwe inosanganisira kuwedzera manyorerwo peji peji domains kuGoogle Analytics.
Kubatanidzwa uchishandisa Script Manager
Nhanho yekutanga yeiyo nzira inosanganisira kuwanikwa neIndaneti yekutsvaga ID. Painyoresa kuG GA, mumwe munhu anoshandiswa script ine code yakasiyana yekutevera. Mushandisi anofanirwa kubatanidza iyo code mune yake / site. Nhamba inodiwa zvakare kana pane shanduko muchinyorwa chepaiti kana mushumiri anoda kuwedzera Analytics kune chikamu chewebsite.
Kuti uwane ID yako yekutsvaga webhusaiti uye snippet ine code, pinda muGA account yako uye chengeta Admin. Muchikamu cheKUTONGA, sarudza kero. Saizvozvowo, enda kuIndaneti YEMPORE uye sarudza pfuma. Pasi pepfuma, sarudza Track Tracking uye zvakare Tracking Code. Iwe uchaona URL yako yekutsvakurudza webhusaiti, uyewo nhamba yeimba yepamusoro pekhasi uye snippet yekutevera, inoratidzwa pasi pekuchengetwa kwewebsite.
Zvadaro, enda kuZvirongwa uye chengeta Script Manager> Wedzera script yako yekutanga> Google Analytics. Pinda muInditi yekutsvaga yawakawana mudanho rekutanga uye chefa "Wedzera Script Details." Mamwe mabhokisi mabhokisi achazarura: mumwe unoratidza "Script Details" uye imwe inoratidza "Mashandisiro eScript." Muchikwata che "Mashandisiro eMagwaro" chengetedza ma subdomains zvaunoda kuti Google Tracking Script ishandiswe. Pakupedzisira, chengetedza uye kuparidzira script uye yakasarudzwa subdomain pamwe nemapeji ayo yakabatana neGoogle Analytics.
Kuwedzera Mapeji Anowanikwa Masamba
Pakarepo mushure mekubatanidzwa kwemashoko, zviitiko zvechokwadi-nguva zvicharatidza vaenzi vanoshingaira pamapeji akabatanidzwa. Dhiyabhorosi yedhadha data ichaonekwa kune imwe mimwe mibairo mushure maawa makumi maviri nemaviri.
Pasinei nehuwandu hwewebsite yaunayo, nguva dzose kune ruzivo rwekuziva kuti vanhu vari kushanyira sei nzvimbo uye kuti chii chavari kutsvaga. Nekubatanidzwa kweGoogle Analytics, kuwana ruzivo urwu zviri nyore. Irozano rinopiwa pamusoro apa richaita kuti hurongwa uite nokukurumidza kuitira kuti iwe utange kutora mararamiro ose ematrichi kubudirira kwebhizimisi Source .